Afrika: Cudurka Ebola oo laga Shirayo - BBC Somali
Afrika: Cudurka Ebola oo laga Shirayo
Hay'adda caafimaadka aduunka ee magaceeda loo soo gaabsho WHO ayaa dalka Ghana ku marti-gelinaysa kulan deg deg ah oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa faafida cudurka halista ah ee EBOLA ee ka dilaacay galbeedka Afrika.
Saraakiisha caafimaadka oo ka socda 11 waddan ayaa magaalada Accra ee Ghana ku kulmaya, waxayna ka tashanayaan sidii loo soo afjari lahaa mushkiladan.
Wasiirada caafimaadka ee saddexda waddan ee uu cudurkan ka jiro ayaa waxa ku biiraya saraakiisha caafimaadka ee waddamada deriska la ah ee Ivory Coast, Mali, Guinea Bissau iyo senegal.
Kullankan oo dhacaya maanta oo arbaca ah waxa sidoo kale lagu casuumay Uganda, DRC Congo Gambia. Dhamaan waddamadan ayaa waxa loo aqoonsaday in ay cudurkan Ebola uu halis ku yahay.
Ebola waa mid ka mid ah cudurada ka dhasha virus-ka oo dunida dhibaato ba'an ku haya waayo si dhaqsa ah ayuu u dilayaa qofkii uu ku dhoco.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in sababta uu sida dhaqsada ah ugu faafayo galbeedka afrika in ay tahay cabsida ay dadka ka muujinayaan cudurka iyo dadka qaar oo aan aaminsanayn ama dafirsan jiritaanka cudurkan.
Qaar ka mid ah bulshooyinka ayaa bukaanada uu ku dhoco cudurka ku dhax haya xaafadaha halkii ay ka geyn lahayeen isbitaalada, arrintaas oo sabab u ah in cudurka uu fido.
Sababta kale ayaa waxay tahay in dadka kunool waddamadan ay si xor ah isaga kala gooshaan xuduudaha arrintaas oo fududenaysa in viruska uu u kala gudbo waddamada.
Hay'ada WHO ayaa in ka badan 150 khabiir u dirtay galbeedka afrika bilooyinkii la soo dhaafay si ay isugu deydo In ay joojiso cudurkan.
Balse waxay hay'addu sheegaysaa in loo baahanyahay in la helo dadaal siyaasadeed oo ay muujiyaan waddamada gobolka si loo xaqiijiyo in la cirib tiro virus-kan.